डेढ महिनाभित्रै ४५ मेगावाट बिजुली थपिंदै, चालु आवको अन्त्यसम्म २०० मेगावाट थपिने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > डेढ महिनाभित्रै ४५ मेगावाट बिजुली थपिंदै, चालु आवको अन्त्यसम्म २०० मेगावाट थपिने
काठमाडौ। आगामी डेढ महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ४५ मेगावाट विद्युत् थप हुने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले २५ मेगावाट क्षमताको ‘मादी ए’ जलविद्युत् आयोजनाले आगामी एक महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी दिए । यस्तै ६ मेगावाटको दरौँदी आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै अर्को दुई महिनामा १२ मेगावाट बिजुली थप हुने मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । हाल ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए आयोजनाले पनि परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । सो आयोजनाबाट हाल २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने प्राविधिक तयारीपछि २५ मेगावाट थप हुनेछ । सगरमाथा सिनो हाइड्रोले निर्माण गरेको सो आयोजनामा नेपाली र चिनियाँ लगानीकर्ताको संयुक्त लगानी रहेको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनाको प्रवद्र्धक कोरियाको कम्पनीसँग पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक २७
२०७३ कार्तिक २७ गते १५:०१ मा प्रकाशित
खुसीको खबर, अब घरजग्गाको नक्सापासदेखि सबै काम अनलाइनबाटै
भारु ५०० र १००० प्रतिबन्ध–नोट माथि सुत्नेलाई समस्याःऔपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन,पूर्व गभर्नर खतिवडाको विश्लेषण !
नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छ : प्रम ओली
महिला एसिया कपका लागि नेपाली टोली थाइल्याण्ड प्रस्थान !
धादिङका १३ उद्योगका नौ लाख सिलिन्डर बजारमै
मुआब्जाको विषयमा बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयमा तोडफोड, प्रहरी र स्थानीय बीच झपड !
सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज कम पाउन थाले